Politika · Mey, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Mey, 2013
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Mey, 2013
Yemen: Tovolahy roa Maty Noho Ny Fisongonana Ireo Fiara Mpanotrona Ny Mariazin'i Sheikh
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Mey 2013
Tanora Yemenita roa no maty ny herinandro lasa teo vokatry ny fisongonana ny filaharana fiara mpanotrona ny mariazin'i Sheikh (filohanà foko) tany Sanaa renivohitr'i Yemen. Nitondra ny fiarany i Khalid Al-Khateeb sy ny namany Hassan Aman raha nisongona ny fiara mpanotrona ny mariazy ary maty vokatr'io fisongonana io. An'i Sheikh Ali Abd Rabo Al-Awadhi ny fiara mpanotrona mariazy, mpikambana iray ao amin'ny antoko Islah any Yemen sy mpikambana ao amin'ny Fihaonambem-pirenena. Nahatonga adihevitra teo amin'ny mpisehatra aterineto maro sy ireo mahery fò ny fahafatesan'izy ireo.
Nolavin'ny Fitondrana Iraniana ny Filatsahan-kofidin'ireo Kandida Roa Tsara Indrindra.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Mey 2013
Nanaitra ny maro indray ny fanirian'ny fitondrana islamika hifehy tanteraka ny fiainana ara-politika rehefa nanambara ny nisafidianan'ity farany ireo kandidà valo monja afaka mifaninana hofidiana ho filoham-pirenena tao anatin'ireo 600 nisoratra anarana tamim-panantenana.
Ireo Olo-Miavaka Tsy Nampoizina Sy Ireo Vehivavy Mihazakazaka Ho Filohan'i Iran
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Mey 2013
Iraniana an-jatony be fanantenana, ao anatin'izany ny vehivavy telopolo, no nisoratra ho kandidà mba hisolo ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad amin'ny fifidianana ho avy ny 14 Jiona 2013 na dia tsy manam-bintana ny ho voafidy aza ry zareo
Però: Fitokonana Tao Iquitos Hanoherana Ny Kolikoly
Amerika Latina 23 Mey 2013
Fitokonana iray nandritra ny 24 ora tao amin'ny tananan'i Iquitos, ao amin'ny faritra Amazona Peroviana no nikendrena hisarihana ny saina amin'ny fihetsika mampiahiahin'ny Governemantam-paritr'i Loreto ary ny fomba fikirakiran'ny Fahefàna Mpanao Lalàna an'ireny tranga ireny
Miampanga Mpanao Gazety ao amin'ny Twitter ny Filohan'i Panama
Matetika loatra ny Filoha Ricardo Martinelli (@rmartinelli) [es] no mahatezitra ny mpiserasera Panameana noho ny fisiahana mampiady hevitra sy mampiady tsotra izao, ary tonga hatramin'ny fanompana aza. Ny ohatra akaiky indrindra dia ny sioka nalefa mivantana tamin'ny mpanao gazety Santiago Cumbrera avy ao amin'ny La Prensa, gazety iray efa nifandona tamin'ny...
Fisidinana Tamin'ny Voromby Tsy Miankina Nanozongozona Ny Fitondrana ao Costa Rica
Costa Rica 23 Mey 2013
Nanozongozona ny fiadidiana ny filoha sy ny firafitry ny mpiara-miasa aminy ny vaovao fa nanome fiaramanidina manokana hisidinan'ny filoha Laura Chinchilla ho any Però ny orinasan-tsolika iray. Tamin'ny voalohany ny anton-dia dia ny hanatrehana ny fanambadian'ny zanaka lahin'ny filoha lefitra Luis Liberman, Saingy nohararaotina izany nanaovana fitsidihana ny filoha Ollanta Humala. Nialoha...
Tiorkia: : Mpialokaloka Siriana No Voaheloka Taorian'ilay Fipoahana Tao Reyhanli
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Mey 2013
Ny 11 May, Reyhanlı [en] tanàna Tiorka kely any amin'ny sisintany manasaraka an'i Tiorkia sy Syria, no teo ambany fanafihan'ny mpampihorohoro. Io no fanafihana mpampihorohoro goavana indrindra [en] teo amin'ny tantaran'ilay firenena repoblikana 90 taona. Ireo mpisera ety anaty aterineto dia naneho hevitra mikasika ilay fipoahana, ny fandraràna iray napetraky ny governemanta amin'ireo media momba ilay zava-doza ary ny fikendrena ireo Siriana mpialokaloka naterak'izany
Mandrara Ny Lohahevitra ‘Tsy-Lazaina Fito’ Ny Governemanta Shinoa
Azia Atsinanana 22 Mey 2013
Nisy mpampianatra anjerimanontolo shinoa iray namoaka vao tsy ela tao amin'ny bilaogy bitika shinoa malaza mitovy amin'ny Twitter antsoina hoe Sina Weibo fa nandidy tsy hampianaran'ny mpampianatra anjerimanontolo lohahevitra fito ny fitondrana, ka tafiditra ao anatin'ireo tsy azo ampianarina ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety, ny fahadisoana nataon'ny antoko komonista taloha ary ny...
Mety Hitondra Fiovana Ve Ny Fifidianana Solombavambahoaka Ao Malezia?
Azia Atsinanana 20 Mey 2013
Noravàn' i Praiministra Najib Razak ny parlemanta Malezianina tamin'ny 3 Aprily 2013 mba hanomanana ny fifidianana solombavambahoaka faha 13 eo amin'ny firenena. Mety mbola hanjaka hatrany amin'ny fifidianana ve ny mpitondra nandritry ny antsasaky ny taonjato lasa? Sa ve hisafidy ny fiovana ny vahoaka?
Mitrandraka Avy Any Ifotony Hisian'ny Fifidianana Madio any Bolgaria
Eoropa Afovoany & Atsinanana 20 Mey 2013
Dimy andro latsaka, ny 12 May, ireo mponina Bolgara dia nifidy parlementa vaovao. Misy fisalasalana anefa raha ny ho fanekena ny fifidianana ho avy. Mba hanampiana ny fanaraha-maso ireo fanitsakitsahana ny dingam-pifidianana, namorona fiasana maro ao anatin'ny aterineto ireo Bolgara mpikatroka mafàna fo. Tatitr'i Ruslan Trad.